कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएका हुन् : गृहमन्त्री थापा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ९ असार २०७६, सोमबार १२:१८ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको बताएका छन् । विप्लव समूहलाई समाप्त पार्न सरकारले कसैलाई निर्देशन नदिएको भन्दै उनले पौडेलको मृत्युबारे छानविन गर्ने पनि बताएका छन् ।
काठमाडाैं । चर्चित बलिउड अभिनेत्री दिशा पटनी हट अनि सेक्सी तस्बिरका कारण सधैँ चर्चामा आउने गरेकी छिन् । दिशाले…
प्रहरीको बिशेष निगरानी रहेका जुवाडेहरु चेक र नगद सहित पक्राउ
काठमाडौं । सरकारले एनजीओ र आईएनजीओलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरे पनि उच्च दबाबका कारण सो प्रयास असफल…
काठमाडौं । मेलम्चीको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसी नफर्किने भएपछि बाँकी काम नेपाली सेनालाई दिने तयारी भएको छ । सरकारले…
कालिकोटको हविगतः के खान्छन्, कहाँ बस्छन् ? कालिकोटमा फैलिएका मुख्य महामारी र क्षति !
काठमाडाैं । खाडाचक्र ४ दलित टोलका ३९ वर्षीय माने विश्वकर्माको ७…
साला फेसबुक !! 167 views
दम्पती त्रिशूलीमा हेलिनुको कारण मिटरब्याज 11 views
बच्चासहित दम्पतीले त्रिशूलीमा हाम फाले, श्रीमतीको मृत्यु 10 views